Tuesday January 29, 2019 - 15:10:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Faafaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax aad u xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lala eegtay goob ay joogeen Saraakiil ka tirsan DF sida ay xaqiijisay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ka dhacay goob lagu magacaabo Baar Itaaliya oo ku taalla nawaaxiga Godka Jilacoow, halkaas oo ay joogeen Saraakiil ka tirsan DFS, waxaana la sheegay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal u hadlay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dileen ugu yaraan 7 Sarkaal oo ka tirsan DFS kuwaas oo ka kala tirsanaa hay’adaha amniga iyo kuwa fulinta ee DF.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha lagu dilay qaraxaas ay ku jiraan saddex sarkaal oo sarsare oo ka kala tirsanaa hay’adda nabadsugida, wazaaradda arimaha gudaha iyo xafiiska madaxweynaha.
Warar xog ogaal ah oo aan helnay ayaa sidoo kale tilmaamaya in qaraxa lagu burburiyey gaadiid ay wateen saraakiisha la beegsaday oo yaallay meel u dhow halka uu qaraxu ka dhacay.
Qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa markale banaanka soo dhigay in hay’adaha amniga ee DF aysan weli u suuragalin in ay ka hortagaan weerarada ay Al-Shabaab ka fulinayso goobaha xasaasiga ah ee ay dagan yihiin hay’adahooda, waxaana taasi ka marag kacaya halka uu maanta qaraxan ka dhacay oo ka mid ah goobaha sida aadka amnigooda loo ilaaliyo.